Accueil > Gazetin'ny nosy > Politika : Ny sefom-pokontany no hanapotika an-dRajoelina
Politika : Ny sefom-pokontany no hanapotika an-dRajoelina
Mazava izao ny raharaha eto amin’ity firenena ity fa ny sefom-pokontany mihitsy no tena manampotika ity firenena eto amin’ity Madagasikara ity. Ny zavatra misy ankehitriny no anamporofoana izany. Tsy hiditra politika isika fa hiresaka teknika tanteraka. Amin’ny fomba ahoana no azo anekena izany fa tsy milamina ny lisitry ny mponina ao amin’ny fokontany iray? Ny fokontany izay manaramaso ny olona miditra sy mivoaka ao aminy ka monina amin’ny toerana iray. Ny sefom-pokontany sy ny komity miara miasa aminy dia mandray an-tsoratra tsy tapaka ny olona vaovao mifindra monina na mivoaka na miditra. Toa izany koa ny maty sy ny teraka. Tsy mahazo na inona na inona any amin’ny fokontany ny mponina iray raha toa ka tsy vita fanisam-bahoaka ara-dalàna.
Ankehitriny dia misy ity raharaha fanomezana sosialim-bahoaka ity ka ny lisitra any amin’ny fokontany no fototra andraisana ny isan’ny olona homena amin’izany. Efa mampiasa solosaina avokoa ny sefo fokontany rehetra eto Analamanga. Dia mbola mahagaga fa mikorontana tampoka izany rehefa tonga ny fizarana izao.
Tsy azo ekena mihitsy ny sehon-javatra misy ankehitriny hoe misy ny olona tsy tokony homena raha toa ka isan’ny olona tokony hozarana io sosialim-bahoaka ity.
Mitaraina ny mponina manerana ny fokontany 192 maro eto Analamanga amin’izao fotoana izao fa tena ny sefom-pokontany no olana amin’ny fizarana ity fanomezana ny sosialim-bahoaka dia ny vary iray gony, ny menaka roa litatra ary ny tambavy CVO izay omen’ny fanjakana maimaimpoana. Tena mafy ny taraina ataon’ny vahoaka fa ny sefom-pokontany no tena olana eto amin’ity firenena ity. Noho izany dia ingahy Rajoelina no voasoketa ankehitriny fa tsy manao ny mangarahara. Manambara aza izy ireo fa hatrany amin’ny fizarana tosika fameno, dia ilay vola 100 000 ariary teo aloha teo dia feno kiantranoantrano sy kolikoly. Izany no antony nampisy ny savoritaka sy ny korontana tany amin’ny fokontany maro teto Antananarivo ireny. Dia voaporofo hatrany izao fa ny sefom-pokontany koa no isan’ny fositra amin’ny tsy fahatombombanan’ny lisitry ny fifidianana eto Madagasikara ka mahatonga ny “doublon”na ny anarana miverimberina amin’ny lisim-pifidianana ireny. Ny CENI (vaomieram-pirenena momban’ny fifidianana) dia any amin’ny fokontany no maka ireo antsoina hoe lisitra fototra ( liste mère). Dia mazava izao fa tena tsy manao ny asany ara-dalàna ny fokontany. Misy ny hadisoana any ataon’ny Ceni saingy ny fototra dia ny sefom-pokontany hatrany sy ny mpiara miasa aminy. Izany no ilazanay fa potehin’ny sefom-pokontany eto Analamanga ankehitriny ingahy Andry Nirina Rajoelina. Ny sefom-pokontany izay milalao politika ka laoviny avokoa na ny mpitondra firenena na ny mpanohitra. Mazava tsara ny raharaha fa vokatry ny tsy fisian’ny fiofanana amin’ny fitondrana firenena izao izay ataon’ny antoko politika ankehitriny izao. Mila mailo ny fanjakana ankehitriny amin’izao fotoana izao amin’ireo sefom-pokontany ankehitriny eto Analamanga ireo fa mazava ny raharaha fa hanapotika an’i Andry Rajoelina no tetikadin’izy ireo.